Forex vs Stock vs Crypto(Bitcoin etc.) कुन मा लगानी गर्दा राम्रो? - Blogs of Binod
लगानी गरेर पैसा कमाउने बिभिन्न माध्यम हरु मध्ये केही लोकप्रिय माध्यम हरु हुन Forex, Stock र Cryptocurrency. आज हामी यी तिन ओटा माध्यम हरुको संक्षिप्त परिचय र यिनी हरुमा लगानी गर्नु को फाइदा र बेफाइदा को बारेमा कुरा गर्नेछौं।
🔵 FOREX Trading
Forex(FX) अथवा Forex exchange भन्नाले बिभिन्न देश हरुले जारी गरेको मुद्रा(Currency) को कारोबार गर्नु लाइ बुझिन्छ। Forex trading मा प्रत्येक दिन लगभग १५० भन्दा बढी मुद्रा हरुको $६ trillion भन्दा बढीको कारोबार हुने गर्दछ।
कारोबार गर्ने बेला को मुद्रा को Demand र Supply को आधार मा मुद्रा को मुल्य मा हुने धटबढ को कारण कारोबार गर्ने व्यक्ती लाइ फाइदा अथवा घाटा हुने गर्दछ।
फाइदा र बेफाइदा हरु।
यो बिश्व को सबैभन्दा ठुलो मार्केट हो।
केन्द्रीय बैङ्क ले Supply र Demand को Control गर्ने भएको हुदा मार्केट Cryptocurrency हरु जती Volatile(अस्थिर) हुदैन।
सोमबार देखी शुक्रबार २४ घण्टा कारोबार गर्न सकिन्छ।
थोरै लगानी मा ट्रेड सुरु गर्न सकिन्छ।
छोटो समय मा कारोबार गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ।
विदेशी मुद्रा बजार बिश्वका आर्थिक र राजनितिक घटना हरु प्रती अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ।
स्टक मार्केट भन्दा तुलनात्मक रुपमा Risky मानीन्छ।
एक चोटी लगानी गरेर लामो समय सम्म प्रतिक्षा गर्दा फाइदाजनक नहुन सक्छ।
🔵 Stock Trading
बिभिन्न कम्पनी हरुले जारी गरेको Stock(Share) हरु को किनबेच गर्नु लाइ Stock Trading भनेर बुझिन्छ। Forex trading मा बिभिन्न देशहरुले जारी गरेको मुद्रा ब्रोकर को माध्यम बाट User to User मा कारोबार हुन्छ भने Stock trading मा बिभिन्न स्टक एक्सचेन्ज हरु अन्तर्गत ब्रोकर मार्फत कारोबार हुन्छ।
Online बाट कारोबार हुनुभन्दा पहिले आफुले किनेको शेयर प्रमाणपत्र ब्रोकर कहा लगेर ब्रोकर ले शेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्तीलाइ स्टक एक्सचेन्ज मार्फत शेयर को किनबेच गर्ने गरेर प्रमाणपत्र को हस्तान्तरण गरेर शेयर कारोबार हुन्थ्यो।
तर अहिले internet को माध्यम बाट घरमै बसिबसी कारोबार गर्न सकिन्छ भने कारोबार गर्ने व्यक्ती ले प्रिन्ट गरीएको शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दैन।
नेपाल मा पनी Nepal Stock Exchange(Nepse) ले केही बर्ष अघी अनलाइन कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरे संगै शेयर मार्केट को लोकप्रीयता दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।
फाइदा र बेफाइदाहरु
राम्रो कम्पनी को छनौट गर्न सकेको खण्ड मा एक चोटी लगानी गरेर बर्सौ सम्म ढुक्क भएर बस्न सकिन्छ।
धेरै कम्पनी हरुले कमाएको नाफा को केही अंश Dividend को रुप मा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
कम्पनी को नाफा बृद्धि संगै थोरै पैसामा किनेको शेयर को मुल्य भविश्य मा धेरै बढ्न सक्छ।
थोरै पैसा बाट पनी लगानी सुरु गर्न सकिन्छ।
शेयर बजार पनी बिश्वका आर्थिक र राजनितिक घटना हरु प्रती संवेदनशील हुन्छ।
कम्पनी घाटा मा गएको खण्ड मा अथवा टाट पल्टन गएमा सबै पैसा डुब्न पनी सक्छ।
कम्पनी छनौट गर्दा ध्यान पुर्याएन भने शेयर को मुल्य नबढ्न सक्छ।
शेयर को मुल्य धेरै बढेको समय मा किनेको खण्ड मा शेयर को मुल्य घट्न सक्छ।
🔵 Cryptocurrency(Bitcoin etc.)
Cryptocurrency डिजिटल मुद्राहरू हुन्, जुन कुनै व्यक्तिहरू, समूहहरू, र केही केसहरूमा बैंकहरू र अन्य कम्पनीहरूले सिर्जना गरेका हुन्छन। यिनीहरुमार्फत लेगल रुपमा सामान र सेवाहरूको लागि सजिलैसँग विनिमय हुँदैनन् जुन तरीकाले राष्ट्रिय मुद्राहरू हुन्छछन। तर अहिले धेरै कम्पनीहरुले आफ्नो बस्तुहरु अथवा सर्विस हरु Cryptocurrency मार्फत खरीद बिक्री गर्न सकिने बनाएका छन।
प्रत्येक दिन लगभग $४ billion भन्दा बढी Cryptocurrency को कारोबार हुन्छ।
२००९ मा एकजना सातोसी नाकामोतो नामक ब्यक्ती(साच्चीकै यी व्यक्ती को हुन अहिले सम्म कसैलाइ थाहा छैन) ले Bitcoin को सुरुवात गरेका थिए। अहीले २०२१ मा २००० भन्दा धेरै cryptocurrency हरु बजार मा छन। त्यसमध्ये केही लोकपिर्य Cryptocurrency हरु निम्न छन।
Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH), XRP ($XRP), Tether ($USDT), Bitcoin Cash ($BCH) , Litecoin ($LTC), EOS ($EOS), Binance Coin ($BNB), Bitcoin SV ($BSV) and Tezos ($XTZ) etc.
मुल्य मा छिटो छिटो धेरै परिवर्तन हुने हुदा छोटो समय मा धेरै फाइदा कमाउन सकिन्छ।
Crypto मार्केट सुरु भएको धेरै नभएको हुदा भविश्य मा अझै मुल्य बढ्न सक्छ।
मुल्य मा छिटो छिटो धेरै परिवर्तन हुने हुदा घाटा पनी हुन सक्छ।(२०१७ December मा १ Bitcoin को मुल्य $१९००० भन्दा बढी पुगेको मा २०१८ February मा मुल्य घटेर $३००० को हाराहारी मा झरेको थियो)
सबैभन्दा धेरै २०२१ January मा Bitcoin को मुल्य $४०००० नाघेको थियो।
छोटो समय मा मार्केट को ट्रेन्ड हेरेर मुल्य घटेको समय मा किन्ने र बढेको समय मा बेच्न को लागी समय छ भने Fx अथवा crypto Trading गरेर नाफा कमाउन सकिन्छ भने लामो समय को लागी लगानी गर्ने अथवा लाभांस(Dividend) प्राप्त गरेर नाफा कमाउने सोच मा हुनुहुन्छ भने Stock मार्केट मा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ।
यी बाहेक Commodities( Gold, Silver, Crude oil etc.) मा पनी लगानी गर्न सकिन्छ।
नेपाली भाषाको शुद्धी असुद्धी को लागी माफी गर्नुहोला।
By Binod Bam on January 17, 2021
जापान बाट Stock Market मा लगानी
Forex vs Stock vs Crypto(Bitcoin etc.) कुन मा लगान...